” နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေကပါ ဝန်းရံခြင်းခံနေရတဲ့ Myanmar Idolက အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် “ - VPS - MCKZONE
” နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေကပါ ဝန်းရံခြင်းခံနေရတဲ့ Myanmar Idolက အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် “
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေးနဲ့ တေးရေး၊တေးဆို ညီမင်းခိုင်တို့က Myanmar Idol Season (4) မှာ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖျော်ဖြေထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Share ပြီး ချီးကျူးဝန်းရံခဲ့ပါတယ်။ ရွက်ပုန်းသီးလေးတွေကို လက်တွဲပြီးခေါ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ Myanmar Idol Season (4) မှာ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ကို “အခုသူဆိုတာ ကြည့်မိတယ် . လွဲချင်လည်း လွဲမှာပေါ့ .ကျွန်တော်ကတော့ သူWinner ဖြစ်မယ်လို့ပဲကြိုမှန်းပါတယ် ” လို့ Winner ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ယုန်လေးရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တေးရေး၊တေးဆို ညီမင်းခိုင်ကလည်း အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ရဲ့ယှဉ်ပြိုင် ဖျော်ဖြေသွားပုံလေးကို ” ထိတယ်မိတယ်မိုက်တယ်ခိုက်တယ်သိပ်ကြိုက်မိတယ်။နောက်ဆုံးအထိအောင်ပါစေမိန်းကလေး ကရုဏာသံလေးရောစပ်ပါဝင်နေလို့ကိုပိုထိရှ ” လို့ ဆိုကာ ညီမင်းခိုင်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှာ ဖော်ပြ ချီးကျူးစကားဆိုထားပါတယ်။အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကတော့ ချင်းပြည်နယ်၊ဟားခါးမြို့ကနေ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းလာတတ်နေတာဖြစ်ပြီး သီချင်းကသူမဘ၀ ဖြစ်တာမို့ အချိန်တိုင်းသီချင်ဆိုနေလို့ အဆောင်ကအဖော်တွေကတောင် တခါတလေမဆိုဖို့ ပြောရတယ်လို့ သိရပါတယ်။သူမကတော့ အသံစစ်ဆေးမှုမှာ လေဒီဂါဂါနဲ့ဘရက်ဒလေကူးပါး တို့ရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်တေးသီချင်း ” Shallow ” ကို ခံစားသက်ဝင်မှုအပြည့်နဲ့ သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တင်ဇာမော် က မြန်မာသီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ဆိုပြဖို့ ပြောသဖြင့် အဆိုတော်နေနေရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “မိန်းကလေးအချစ်” သီချင်းကို ကရုဏာအသံလေးနဲ့ ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုခဲ့ကာ Golden Ticket ရရှိခဲ့ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရော အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကိုကြည့်ပြီးရင် အမြင်လေးတွေ မျှဝေခဲ့ဦးနော်။
Source: Yone Lay, Nyi Min Khine, Myanmar Idol
credit – DarDar-CeleGabar
” နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတှကေပါ ဝနျးရံခွငျးခံနရေတဲ့ Myanmar Idolက အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ”
နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတှဖွေဈတဲ့ အဆိုတျောယုနျလေးနဲ့ တေးရေး၊တေးဆို ညီမငျးခိုငျတို့က Myanmar Idol Season (4) မှာ လာရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသူလေး အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ရဲ့ ယှဉျပွိုငျဖြျောဖွထေားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို Share ပွီး ခြီးကြူးဝနျးရံခဲ့ပါတယျ။ ရှကျပုနျးသီးလေးတှကေို လကျတှဲပွီးချေါလရှေိ့တဲ့ နိုငျငံကြျော အဆိုတျောယုနျလေးကတော့ Myanmar Idol Season (4) မှာ လာရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသူလေး အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ကို “အခုသူဆိုတာ ကွညျ့မိတယျ . လှဲခငျြလညျး လှဲမှာပေါ့ .ကြှနျတျောကတော့ သူWinner ဖွဈမယျလို့ပဲကွိုမှနျးပါတယျ ” လို့ Winner ဖွဈနိုငျတယျ ဆိုပွီး ယုနျလေးရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
တေးရေး၊တေးဆို ညီမငျးခိုငျကလညျး အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ရဲ့ယှဉျပွိုငျ ဖြျောဖွသှေားပုံလေးကို ” ထိတယျမိတယျမိုကျတယျခိုကျတယျသိပျကွိုကျမိတယျ။နောကျဆုံးအထိအောငျပါစမေိနျးကလေး ကရုဏာသံလေးရောစပျပါဝငျနလေို့ကိုပိုထိရှ ” လို့ ဆိုကာ ညီမငျးခိုငျရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှာ ဖျောပွ ခြီးကြူးစကားဆိုထားပါတယျ။အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျကတော့ ခငျြးပွညျနယျ၊ဟားခါးမွို့ကနေ ရနျကုနျမှာ ကြောငျးလာတတျနတောဖွဈပွီး သီခငျြးကသူမဘ၀ ဖွဈတာမို့ အခြိနျတိုငျးသီခငျြဆိုနလေို့ အဆောငျကအဖျောတှကေတောငျ တခါတလမေဆိုဖို့ ပွောရတယျလို့ သိရပါတယျ။သူမကတော့ အသံစဈဆေးမှုမှာ လဒေီဂါဂါနဲ့ဘရကျဒလကေူးပါး တို့ရဲ့နာမညျကွီးဇာတျဝငျတေးသီခငျြး ” Shallow ” ကို ခံစားသကျဝငျမှုအပွညျ့နဲ့ သီဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒိုငျတဈဦးဖွဈတဲ့ တငျဇာမျော က မွနျမာသီခငျြးလေးတဈပုဒျ ဆိုပွဖို့ ပွောသဖွငျ့ အဆိုတျောနနေရေဲ့ နာမညျကွီးသီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ “မိနျးကလေးအခဈြ” သီခငျြးကို ကရုဏာအသံလေးနဲ့ ခံစားသကျဝငျမှုကောငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုခဲ့ကာ Golden Ticket ရရှိခဲ့ပါတယျ။CeleGabar ပရိသတျကွီးရော အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ ရဲ့ ဖြျောဖွမှေုကိုကွညျ့ပွီးရငျ အမွငျလေးတှေ မြှဝခေဲ့ဦးနျော။
Categories:	CELEBRITY	/ by MC KZONE September 28, 2019
လူမှုကွန်ယက်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ...
ထန်းပင်ပေါ်တက်ပြီး မြန်မာ့ဒေသရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ ကို ကမ္ဘာသိအောင် promote လုပ်သွားတဲ့ အချစ်တော်ကြီး…
ထန်းပင်ပေါ်တက်ပြီး မြန်မာ့ဒေသရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ ကို...
” ထိုင်းကပရိသတ်တွေ ဝန်းရံနေလို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ တိုင်ရွန် “
ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကြီးစီးပြီး Sinon နဲ့ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်
မြန်မာပြည်ကို သူ့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်လို့ သဘောထားတဲ့...
” ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်တကြီးအားပေးစကားဆိုနေရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ စိတ်အခြေအနေ ”
မုဒိန်းကျင့်ခန်းရိုက်ကူးရာမှ ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် October 19, 2019
၁၈၇မိုင်ဝေးတဲ့ ဆေးရုံကို အမေနဲ့ ညီတင်ပြီး စက်ဘီးဖြင့်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး October 19, 2019
ထန်းပင်ပေါ်တက်ပြီး မြန်မာ့ဒေသရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ ကို ကမ္ဘာသိအောင် promote လုပ်သွားတဲ့ အချစ်တော်ကြီး… October 19, 2019
ဒေါင်းဝေဒနာရှင်လေးတွေရဲ့ ပါရမီကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ နယူးယောက်က ဖက်ရှင်ရှိုး October 19, 2019